प्रहरी नै मिच्छन् ट्राफिक नियम, डिआइजीकै गाडी सडकपेटीमा « प्रशासन
प्रहरी नै मिच्छन् ट्राफिक नियम, डिआइजीकै गाडी सडकपेटीमा
काठमाडौं । नियम मिच्ने वा अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु प्रहरीको दायित्व हो । यसकारण पनि प्रहरी कानुनको परिपालना गराउन सजक हुनुपर्छ । तर, विहिबार सिंहदरवार परिसरभित्रको दृष्य हेर्दा लाग्छ– प्रहरी कानुनको परिपालना गराउन सजक छैनन् । बरु, आफै कानुन मिचिरहेका छन् ।
विहिबार दिउँसो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको भवनअगाडिको सडक पेटीमा नेपाल प्रहरीका डिआइजी मनोज नेउपानेले चढ्ने गरेको बा.१ झ. ७९४६ नम्बरको गाडी पार्किङ गरियो । गाडीले मन्त्रालयको भवनअगाडिको सडक पेटी पूरै छोपिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेन्द्र थापा सडकपेटीमा गाडी पार्किङ गरिनु गल्ती भएको बताउँछन् । ‘आम मानिस मात्र होइन, नेपाल प्रहरीले पनि गल्ती गरे कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । गाडी चालकले सडकपेटीमा पार्किङ गरेकोबारे बुझ्ने उनले बताए ।
ट्राफिक नियम मिच्नेलाई न्यूनतम एक हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारमा नै कर्मचारीका हाकिम तथा मन्त्रीहरुले नियमको धज्जी उडाउँछन् भने यिनिहरुबाट आम नागरिकले के सिक्ने ?
22 September, 2021 2:26 pm
अमेरिका भ्रमणमा एमसीसी प्राथमिकतामा छैनः परराष्ट्रमन्त्री खड्का
काठमाडौँ । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा मिलेनियम